के डिप्रेशनमा छन् अरमान ? इन्स्टाग्रामका सबै पोष्ट डिलिट गरेपछि ट्वीटरमा लेखे यस्तो |के डिप्रेशनमा छन् अरमान ? इन्स्टाग्रामका सबै पोष्ट डिलिट गरेपछि ट्वीटरमा लेखे यस्तो – हिपमत
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मूख्यमन्त्री पदबाट दिए राजीनामा
के डिप्रेशनमा छन् अरमान ? इन्स्टाग्रामका सबै पोष्ट डिलिट गरेपछि ट्वीटरमा लेखे यस्तो
बलिउडका प्लेब्याक सिंगर अरमान मलिक इन्स्टाग्राममा आफ्नो हालैको पोष्टपछि चर्चामा छाएका छन् । उनले एउटा पोष्ट गरेका थिए जसमा उनले लेखेका थिए, ‘अब योभन्दा बढी सहन सक्दिनँ ।’ यो पोष्टमा उनले न त कुनै तस्बिर पोष्ट गरेका थिए न नै कुनै भिडियो । कालो ब्याकग्राउन्डमा अंग्रेजी पाँच शब्द देख्न सकिन्थ्यो । यसबाहेक उनले आफ्नो पूरा इन्स्टाग्राम प्रोफाइल पनि डिलिट गरिदिए, तयसपछि उनका प्रशंसक निकै चिन्तित भएका थिए ।
अरमानको यो पोस्टपटि प्रशंसकले कतै अरमान डिप्रेशनबाट त जुधिरहेका छैनन् भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिले भने अरमानको अकाउन्ट ह्याक भएको हो कि भनेर पनि अनुमान गरिरहेका छन् । प्रशंसकका साथै संगीत क्षेत्रका हस्तीले पनि अरमानलाई इन्स्टाग्राम कमेन्टमार्फत् उनको स्थितीबारे सोधेका थिए । यद्यपि, इन्स्टाग्रामपछि उनले ट्वीटरमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
A post shared by ARMAAN MALIK 🧿 (@armaanmalik) on Mar 10, 2020 at 11:34am PDT
इन्स्टाग्राममा अरमानको यो पोस्टको केही घण्टापछि उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘चिन्ता नलिनुहोस्, समय आएपछि सबैकुरा थाहा हुन्छ ।’
अरमानका थुप्रै प्रशंसकले उनको यो पोस्ट मुनी पनि विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । स्मरण रहोस्, इन्स्टाग्राममा उनले यसअघि गरेका सबै पोष्ट डिलिट गरेका छन् । ८० लाख फलोअर्स भएको उनको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा अहिले तीनवटा मात्रै पोष्ट छन् ।
बिहिबार, फाल्गुण २९, २०७६मा प्रकाशित गरिएको
होटल म्यारियटमा ओली र नेपाल पक्षीय नेताको छलफल
देउवा भेटेलगत्तै माधव नेपालले राष्ट्रपतिलाई भेटे
देउवा–माधव नेपाल भेटवार्ता सम्पन्न, प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल पार्नेबारे छलफल